Sida Saxda Ah Ee La Iskaga Daahiriyo Dhiiga Caadada - Daryeel Magazine
Sida Saxda Ah Ee La Iskaga Daahiriyo Dhiiga Caadada
Waxaan wada ognahay in dahaaradu tahay iimaanka badhkii ,waxaan kaloo ognahay in dahaaro la,aan ayna asnxayn acmaasha qaarkood sida salaada.soonka. xajka iwm.
Hadaba su,aasha aan is waydiin karnaa waxay tahay sideen isaga daahirinayaa Xaydka (dhiiga caadada) maxaa la iga rabaa inaan sameeyo?
Iinsha Allah qodobo sahlan oo ka midda talaabooyinka aan qaadayno markaan rabno inan iska daahirino dhiiga caadada daryeelmagazine.com sheegi doontaa hadii ilaahay yiraahdo.
-marka ugu horeysa waxaad niyaysataa inaad iska daahirinayso Xayd.waayo niyada weeye waxa kala saaraya maydhashadaada caadiga ah iyo is daahirintaadan. Tani waa Cibaado ka midda cibaadooyinka.hadaadan niyo la imaan waxay noqonaysaa adoo iska qubeystay qubeys caadi ah oo kale, niyaduna waa qalbiga ee maaha inaa leedahay oo ku dhawaaqayso (Nawaytu)iwm..
-Si fiicana u maydh farjiga(xubinta taranka ) waxaad kaloo sameysaa oo Suno ah inaad maro yar intaa soo qaadato wax udgoona mariso kumasaxdo farjiga adoo raacraacaya raadkii dhiiga si urku u tago…
-Bismilaah dheh, hadaad suuliga ku jirto niyada ayaad ka leedahay, sadexjeer maydh gacmahaaga ka dibna waysayso sida waysadii salaada oo kale. culimada qaar waxay leeyihin marka la waysaysanayo lugaha waa laga tagayaa oo marka u danbaysaa la maydhayaa qaarna cagsiga.
-Waxaad maydhaa dhamaan jidhkaaga dhan adoo ka bilaabaya dhinacaaga midig. Sadex jeer ku shub madaxaaga biyaha adoo ka bilaabaya dhinaca midig.daryeelmagazine.com
-si fiicana u gelgeli biyaha timaha ilaa ay wada qoyaan gunta timahana gaarsii biyaha.hadey daban yihin( tidcan yihin) furfur hadaa ka baqdo inay biyuhu si fican u gaari waayaan, ka dib wada gaarsii biyaha jidhkaaga oo dhan.
-markaa dhameyso intaa lugahaaga ku maydh meel kale oo ka durugsan xoogaa mesha ku maydhanaysay.
Maxaa keena Dhiiga Ka Yimaada Gabadha Uurka Leh? Isbedelka Niyada ee Caadada Ka Hor Caadada Soo Daahdo Uur La’aan